Imithetho yaseGranger yayiyiqela lemithetho elawulwa ngumthetho we-Midwestern US uthi i-Minnesota, i-Iowa, i-Wisconsin, ne-Illinois, ngase-Illinois ngasekupheleni kwe-1860 kunye neye-1870s emva kweMfazwe yaseMelika. Ukukhuthazwa yi-Granger Movement ehlelwe liqela labalimi be-National Grange yoMyalelo we-Patrons of Husbandry, iMithetho ye-Granger yayenzelwe ukulawula ngokukhawuleza ukunyuka kwezothutho kunye nokugcinwa kwemirhumo ekhokhwa yinkampani yesitimela kunye neenkampani zokuphakamisa izityalo.
Njengomthombo wokutshatyalaliswa okugqithiseleyo kwindlela yokuqhuba umzila womzila womzila, i-Granger Laws yakhokelela kwiimeko ezininzi zeNkundla ePhakamileyo ze-US, ezigqitywe nguMnn v. Illinois kunye noWashin v . Ifa le-Movement Granger isaphila namhlanje ngesimo seNational Grange.
Intshukumo ye-Granger, iMiranger Grands, kunye neGrange yamanje njengobungqina bokuba lukhulu kakhulu iinkokheli zaseMelika ziye zafakwa ngokusesikweni kwezolimo.
"Ndicinga ukuba oorhulumente bethu baya kuhlala bezintlu ngeenkulungwane ezininzi; xa nje bezolimo ngokubanzi. " - UThomas Jefferson
AmaKoloni aseMelika asebenzisa igama elithi "grange" njengokuba babe neNgilani ukubhekisela kwindlu yokufama kunye nokuhlanganiswa kwayo. Eli gama ngokwayo livela kwisiLatini igama lokusanhlamvu , grānum . Kwiziqithi zaseBrithani, abalimi babedla ngokuba "ingozi."
I-Granger Movement: I-Grange iyazalwa
Intshukumo ye-Granger yayibambiswano lamafama aseMerika ikakhulukazi kumazwe aseMidwestern naseMaspala asebenze ukwandisa inzuzo yezolimo kwiminyaka elandela iMfazwe YaseMelika .
Imfazwe Yombango yayingazange ibe nomusa kumafama. Abambalwa abaye bakwazi ukuthenga umhlaba kunye noomatshini baye batyala ngokunyanisekileyo kwityala. Izitimela, ezazingummandla wendawo, zazingasese kwaye zazingekho mthethweni. Ngenxa yoko, izitimela zazikhululekile ukuhlawula iifama ezigqithisileyo zokuthutha izityalo zazo kwiimarike.
Ingeniso yokuphazamiseka kunye neentlekele zomntu zemfazwe phakathi kweentsapho zezolimo ziye zashiya ubuninzi bezolimo zaseMerika kwiimeko eziphazamisayo.
Ngo-1866, uMongameli Andrew Johnson wathumela igosa leSebe lezoLimo laseUnited States u-Oliver Hudson Kelley ukuvavanya imeko yezolimo emva kwezempi eMzantsi. Utshitshiswe yinto ayifumeneyo, uKelley ngo-1867 wasungula i-National Grange yesiGaba seMatrons of Husbandry; intlangano ayeyithemba ukuba iya kubambisa abalimi baseMzantsi neNyakatho ngomgudu wokusebenzisana ukuphucula imigaqo yokulima. Ngowe-1868, i-Grange yesizwe yokuqala, i-Grange No. 1, yasungulwa eFredonia, eNew York.
Nangona okokuqala kuqaliswe ngokusisiseko kwiinjongo zemfundo nezentlalo, i-granges yendawo yakhonza njengeeforamu zezopolitiko apho amafama awakhankqalaza amaxabiso akwandayo ngokuqhubekayo wokuthutha nokugcina iimveliso zabo.
I-granges yaphumelela ekunciphiseni ezinye zeendleko zabo ngokukwakhiwa kweendawo zokugcina izityalo zengingqi kwakunye neenqwelo zokusanhlamvu, i-silos, kunye neentsimbi. Nangona kunjalo, iindleko zokuthutha izithuthi zifuna umyalelo olawula i-conglomerate ye-shishini enkulu. umthetho owaziwa ngokuthi "imithetho ye-Granger."
Ekubeni i-Congress ye-US ayiyi kuyenza imithetho ye -antitrust ye-federal kuze kube ngowe-1890, inzululwazi ye-Granger yayimele ibuke kwii-legislature zabo zorhulumente ukuze zikhuseleke kwizinto ezixabisekileyo zendlela yokuhamba nomzila weendlela zokugcina izityalo.
Ngowe-1871, ngenxa yeyona nto eyenziwa yinkqubo enkulu eyenziwa yi-granges yendawo, ilizwe lase-Illinois lenze umthetho olawula iindlela zokuloliwe kunye neenkampani zokugcina ukutya okusanhlamvu ngokubeka amanani aphezulu anokubahlawula abalimi kwiinkonzo zabo. Ihlabathi laseMinnesota, iWisconsin, ne-Iowa likhawuleza lidlulisa imithetho efanayo.
Ukwesaba ukulahleka kwintlawulo kunye namandla, iindlela zokuhamba kunye nokugcinwa kwezinto zokugcina okusanhlamvu zinzima kwimithetho yaseGranger enkundleni. Iziganeko ezithi "i-Granger cases" ekugqibeleni zafika kwiNkundla ePhakamileyo yase - United States ngo-1877. Izigqibo zenkundla kulezi ziko zibeka phambili izinto ezisemthethweni eziza kutshintsha ngonaphakade i-US nezoshishino.
Ngomnyaka we-1877, uMnn noScott, inkampani yokugcina okusanhlamvu e-Chicago, itholakala enetyala lokuphula umthetho wase-Illinois Granger. UMnn noScott babhenxisa isigwebo sokuthi umthetho we-Granger ngumthetho wawungenakunqandwa komthetho kwipropati yakhe ngaphandle komgaqo wenkqubo ngenxa yokuphulwa kwesiTshintsho seshumi elinesine .
Emva kokuba iNkundla ePhakamileyo yase-Illinois igxininise umthetho waseGranger, icala likaMnn v. Illinois lathinjwe kwiNkundla ePhakamileyo yase-United States.
Kwisigqibo se-7-2 esibhaliweyo nguMgwebi oyiNtloko uMorrison uRucick Waite, iNkundla ePhakamileyo yenze isigqibo sokuba amabhizinisi anikezela umdla woluntu, njengalezo ezigcina okanye ezithumela izityalo, unokulawulwa nguRhulumente. Ngokwakhe uluvo, u-Justice Waite wabhala ukuba umgaqo-karhulumente wezoshishino wabucala ulungile kwaye ufanelekile "xa lo mqathango ubalulekile ukuba uluntu lube luhle." Ngalesi sigqibo, imeko yaseMnn v. Illinois ibeka phambili ibalulekileyo eyabangela isiseko inkqubo yolawulo lolawulo lwangoku.
Wabash v. Illinois kunye noMthetho we-Interstate Commerce Act
Phantse kwiminyaka elishumi emva kweMunn v. I-Illinois iNkundla ePhakamileyo iyakunciphisa kakhulu amalungelo aleli lizwe ukulawula urhwebo lwangaphakathi ngokulawula kwayo kwimeko ye-1886 yaseBabash, eSt. Louis & Pacific Railway Inkampani v .
Kwimeko ethiwa "Ubash Case," iNkundla Ephakamileyo yafumana i-Illinois 'iGranger umthetho njengoko isetyenziswe kumzila wesitimela ukuba ingahambelani nomgaqo-siseko njengoko ifuna ukulawula ukuhweba phakathi kwamanye amazwe, igunya eligcinwe kuRhulumente wesigqeba ngeSilungiso seshumi .
Ephendula kwi-Wabash Case, iCongress yamisela umthetho we-Interstate Commerce Act ka-1887. Ngaphantsi kwesi senzo, umzila wezomzila waba yimboni yokuqala yaseMelika ngokwemimiselo yomgaqo-nkqubo kwaye kwakufuneka ukuba kwaziswe urhulumente wesigqeba ngamazinga abo. Ukongezelela, isenzo sivalwe umzila weendlela ekuhlawuleni amaxabiso ahlukeneyo ngokubhekiselele kumgama.
Ukunyanzelisa imimiselo emitsha, isenzo senze kwakhona iKomishoni ye-Interstate Commerce, eyokuqala eyimfuneko karhulumente .
Umthetho Wombumbi Wase-Wisconsin
Kuzo zonke i-Granger imithetho eyenziwe, i-Wisconsin "uMthetho woMbumbi" yayikude kakhulu. Ngoxa i-Granger imithetho yase-Illinois, i-Iowa, neMinnesota yabela ukulawulwa kweendleko zoololiwe kunye namaxabiso okugcina ukutya okuziinkozo kwiimishini zokulawula ezizimeleyo, uMthetho woMbumbi waseWisconsin wanika igunya lephondo mthetho ukubeka loo maxabiso. Umthetho ubangele inkqubo yokulungiswa kwexabiso eyimimandla eyayivumela ukuba akukho nzuzo nayiphi na inzuzo yomzila. Ukubona akukho nzuzo ngokwenza njalo, imizila yeendlela ezithintele ukuyeka ukuzakhela iindlela ezintsha okanye ukwandisa iingoma ezikhoyo. Ukungabikho kokwakhiwa kaloliwe kwatyelela umnotho weWisconsin kwixinzelelo ekunyanzelweni komthetho wephondo ukuba ususe uMthetho woMbumbi ngo-1867.
Namhlanje i-National Grange isisiseko esinamandla kwizolimo zaseMerika kunye neyona nto ebalulekileyo ebomini. Ngoku, ngowe-1867, i-Grange ikhuthaza izizathu zabalimi kwiindawo ezibandakanya ukurhweba ngokukhululekileyo kwehlabathi kunye nomgaqo-nkqubo wefama wasekhaya . '
Ngokwe-statement yayo ye-mission, i-Grange isebenze ngokubambisana, inkonzo kunye nomthetho ukubonelela ngabanye kunye neentsapho ngamathuba okuphuhliswa kwiindawo zabo eziphezulu ukwenzela ukwakha uluntu oluqinileyo kunye nelizwe, kunye nelizwe elinamandla.
EkwaseWashington, DC, i-Grange yinhlangano engeyiyo inxaxheba exhasa kuphela umgaqo kunye nomthetho, akukho mcimbi wezopolitiko okanye abaviwa ngabanye.
Nangona kwasekuqaleni kusekwe ukusebenzela abalimi kunye nemigudu yezolimo, i-Grange yesimanje iphakamisa imiba eyahlukeneyo, kwaye ubulungu bayo buvulelekile kunoma ubani. "Amalungu avela kwiidolophu ezincinci, iidolophu ezinkulu, amafama, kunye neendawo zokuhlala," kusho uGrange.
Ngemibutho engaphezu kwama-2,100 yoluntu kuma-36 athi, iHoloji ze-Grange zendawo ziyaqhubeka zikhonza njengamaziko abalulekileyo ebomini basekuhlaleni.
Ukwakha i-Erie Canal
Ukuvukela kwePontiac kunye neNqununu njengeSixhobo
Ngomthetho weClayton Antitrust
Ubume ngokubanzi kwiNdebe yeMelika yaseMelika kwi-Gymnastics
I-Top 6 Liberators yaseMzantsi Melika
Ngaba Usuku LwamaNgcwele Ngumhla Oyingcwele?
Indlela yokuCwangcisa i-VIN Data Plate ye-Mustang ye-Classic Mustang